ကိုဩဒိနိတ်: Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:ISO 3166/data/BR' not found. 22°54′30″S 43°11′47″W﻿ / ﻿22.90833°S 43.19639°W﻿ / -22.90833; -43.19639ကိုဩဒိနိတ်: Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:ISO 3166/data/BR' not found. 22°54′30″S 43°11′47″W﻿ / ﻿22.90833°S 43.19639°W﻿ / -22.90833; -43.19639
၂၀၁၄ ရီယိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲနှင့် ၂၀၁၆ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတို့ကိုလည်း ကျင်းပနိုင်ခဲ့သောမြို့ဖြစ်သည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရီယိုဒီဂျနေးရိုးမြို့&oldid=657440" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃ ဇွန် ၂၀၂၁၊ ၀၈:၂၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။